ဒုံးကျည်များ ဆက်လက် ထုတ်လုပ်မည် ဟု အီရန် သမ္မတပြောကြား - Yangon Media Group
ဒူဘိုင်း၊ အောက်တိုဘာ ၂၉
အီရန်သမ္မတ ရိုဟာနီက မိမိတို့အနေဖြင့် ကာကွယ်ရေးအတွက် ဒုံးကျည်များ ဆက်လက်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါလုပ် ဆောင်ချက်သည် နိုင်ငံတကာသဘောတူညီချက်များကို ချိုးဖောက်သည်ဟု မယူဆကြောင်း အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်တွင် အစိုးရရုပ်သံမှ တစ်ဆင့်ပြောကြားသည်။
အီရန်၏ ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် အစီအစဉ်အပေါ် ဆန်ရှင်အသစ်များချမှတ်ရန် အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်က မဲခွဲအတည်ပြုအပြီး ရက်ပိုင်းအကြာတွင် ရိုဟာနီက ထိုသို့ ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်သည် အီရန် နျူကလီးယားသဘောတူ ညီချက်မှချက်ချင်းမနုတ်ထွက်ဘဲ အီရန်ကိုတိုးမြှင့် ဖိအားပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ”ကျွန်တော်တို့ဒုံးကျည်တွေ ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ ဆက်ပြီးထုတ်လုပ်သွားမယ်။ ဒီလုပ်ရပ်က ဘယ်နိုင်ငံတကာ သဘောတူညီချက်ကိုမှ မချိုးဖောက်ဘူး”ဟု ရိုဟာနီက လွှတ်တော်တွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။ ”ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ ဘယ်လက်နက်မဆို ထုတ်လုပ်သွားမယ်။ စုဆောင်းထားမယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကာကွယ်ဖို့အတွက်လို တဲ့အချိန်မှာထုတ်သုံးသွားမယ်”ဟု ရိုဟာနီက ဆက်လက်ပြောသည်။
အီရန်အနေဖြင့် နျူကလီးယားလက်နက်သယ်ဆောင်နိုင် သော ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုများ မပြုလုပ်ရန် ကုလသမဂ္ဂက တားမြစ်ထားသည်။ အီရန်သည် ထိုတား မြစ်ချက်ကို ဖောက်ဖျက်သည်ဟုဆိုကာ အမေရိကန်က ဆန်ရှင်များချမှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ အီရန်ကမူ မိမိတို့၏ ဒုံးကျည်များသည် နျူးကလီးယားလက်နက် သယ်ဆောင်နိုင်ရန် မရည်ရွယ်ဟု ငြင်းဆိုလိုက်သည်။ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်က အီရန်သည် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် နျူကလီးယားသဘောတူညီချက်ကို လိုက်နာခြင်းမရှိဟု ယခုလ အ စောပိုင်းတွင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာ စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များကမူ သဘောတူညီချက်ကို အီရန်ချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဟု ပြောဆိုထားသည်။
ဂျူဗင်တပ်နှင့် ဒီလစ်တို့အကြား သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီဟု အေးဂျင့် အတည်ပြု
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့(IMF) ကိုယ်စားလှယ်များ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နှစ်ပတ်လည်စီးပွ?
မီးကြွင်း မီးကျန်မှ တစ်ဆင့် ချောက်မြို့နယ်၌ မီးလောင်မှုဖြစ် နေအိမ်နှစ်လုံး၊ နွားတင်းကုတ် တ??
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင် လေယာဉ်နှစ်စင်း ကောင်းကင်၌တိုက်မိ၊ သုံးဦးသေဆုံး